Etu esi edebe pendant ọla edo - ụzọ 6 | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Goolu bụ ọla dị mma, ma dị oke ọnụ, mana ka oge na-aga, o nwere ike ghara ịdị mma ma nwee ike idozi ya. Ihe ịchọ mma ọla edo - pendants na pendants - na-abụ ihe ruru unyi ma na-agwụ, kpuchie ya na plasta. Mgbe ụfọdụ, ha kwesịrị ịhazi nhicha.
Maka ndị na-achọ ọfụma, ụdị ọrụ a ga-efu gị nke ukwuu. Enwere m ike iji aka m hichaa ọla edo
Maka usoro a, ịnwere ike iji ọgwụ a na-akpọ ndị mmadụ. Ha niile nwere ego, dị irè, nwee ike iweta ihe ịchọ mma ahụ mma.
Mpempe ọla edo na mpempe akwụkwọ GOI
Jiri ọla ọcha ọ bụla sachapụ pendọm ọ bụla, gụnyere ngwaahịa ndị nwere paịlị. Na mgbakwunye na GOI tapawa, ị ga-achọ flap ajị anụ, amonia, asacha efere na nhicha akwa.
buru ụzọ tinye aka n’akụkụ ajị anụ ahụ ma tee pendaneti n’akụkụ niile nke ọma.
mezie udiri amonia (1 tsp), mmiri di ocha (200 ml) na asacha (kwa 1 tsp);
na-emikpu ọla dị na mmiri a na ọkara mmiri;
wepụ ọla edo na osisa ahụ, jiri ezé ezé na-ete ebe ndị mebiri emebi;
jiri mmiri nke mmiri ọkụ seacha ihe ahụ;
Jiri nhicha dị ọcha hichaa akọrọ.
Mmanya, yabasị na lemon - ezigbo ọla edo dị ọcha
Ghichaa na ngwaahịa sitere na anụ ahụ dabara adaba maka obere adịghị ọcha, ọ na-anagide ihe nkiri na-ete mmanụ n’elu ngwaahịa ọla edo.
Jiri akwa 9% (tebụl ma ọ bụ apụl) hichaa nkochi ime akwa ma hichaa ọla edo ahụ. Otu ihe dika mmanyanwere yabasị (ihe ọ juiceụ itsụ ya) na ọhụrụ ihe ọṅụṅụ lemon.
Ọcha Ọcha ọla
Nwere ike zụta ha ngwa ahịa na nnukwu ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa. Were ego ahụ ezubere maka iji ọla edo rụọ ọrụ. Ha ga-enwe amonia. Jiri akwa dị larịị ejiri mmiri dị otú ahụ mesoo pendant ma ọ bụ pendant. Ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ na-agbaze, mgbe ahụ tinye ya na mmiri mmiri kpamkpam - ọtụtụ minit ma ọ bụ maka oge onye nrụpụtara mmiri mmiri na-akwado maka ihicha ọla edo (na ntuziaka ma ọ bụ na nkwakọ ngwaahịa).
Ntị! Enwere ike iji ngwaahịa Ammonia naanị maka ngwaahịa na-enweghị okwute.
Zụta ọgwụ ọgwụ amonia na ụlọ ahịa ọgwụ. 10% ga-eme. Ọ bụrụ na mmadụ echefuru, anyị na-echeta - nke a bụ amonia. Ghichaa dika esi di na uzommeputa gara aga. Nsonaazụ agaghị adị njọ, ọnụ ahịa ahụ ga-adịkwa ọnụ ala.
“Zọ ọzọ “nna nna” - ka esi edo edo edo
Notchọghị ịnwale na "onwu"? Gbalịa ikpochapụ pendant ọla edo ụzọ ochie. Tụọ ihe ọ 50ụ beerụ mmanya bekee dị XNUMX ml, wunye nkochi ime akwa na-adịghị n'ime ya. Kpoo ngwakọta ahụ, na-ehicha akwa ajị anụ ma ọ bụ nkata n'ime ya, hichaa ihe ịchọ mma ahụ ọtụtụ oge. Jiri mmiri dị ọcha sachaa ya.
N'ime ụlọ ebe a na-ere ọla, ha na-erekwa ahịa na ngwaahịa nlekọta ọla edo pụrụ iche. Ihe ndị a bụ iberibe akwụkwọ n'ụdị tapawa ma ọ bụ gel. A na-eme ha na ndabere nke mmanụ jelii / mmanụ na mgbakwunye nke nzu, magnesia na-acha ọcha, lead carbonate, rock sedimentary (tripoli), corundum (emery).
Ego ndị dị otú a na-enye gị ohere ihicha ọla edo ahụ ngwa ngwa dịka o kwere mee, weghachi ya n'ọnọdụ zuru oke, nke na-adọrọ adọrọ. N'agbanyeghị ọnụnọ irighiri ihe na mado, ọ na-eme nwayọ ma na-atọ ụtọ. Ndi na-ere ihe eji ere ahia jiri aka ha di ocha edo edo di nma ma obu “ihe” ahu “adi” n’elu windo ma atufue ya.
Etu esi edo edo edo n’ụlọ
Ihe na fashion
Ajuju 21 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,357.